Nhau - Inoraswa nitrile magurovhosi chigadzirwa
Kupeta kugadzirwa kwemaitiro
Kuchenesa mold nemaoko → hovhoni yemaoko → tangi yekuomesa → hovhoni → tangi yelatex 1→ ovheni → tangi yelatex 2→ hovhoni → kugeza → hovhoni → kukunguruka → hovhoni huru → kutonhora → chlorine yekuwachisa tangi → kugeza → kugeza → kugeza → PU tank → hovhoni yekupedzisira → pre-kukurura → kukurura → kuongorora → kurongedza → kuchengetedza → kuongorora kutumira → kurongedza nekutumira.
Magirovhosi enitrile anoraswaimhando yemakemikari ekugadzira zvinhu, akagadzirwa neacrylonitrile uye butadiene kuburikidza nekugadziriswa kwakakosha uye kuvandudza fomula, kupenya kwemhepo uye kunyaradza kwave pedyo nelatex magurovhosi, uye haizobudise chero ganda allergy phenomenon.Magurovhosi eNitrile akagadzirwa mumakore achangopfuura uye anogona kusvika 100 uye 1000 mamakisi mushure mekuchenesa panguva yekugadzirwa.Magirovhosi enitrile anoraswa kazhinji haana hupfu.
Magurovhosi eNitrile ane acid - inodzivirira, alkali - inodzivirira, mafuta - inodzivirira, isiri-chepfu, haina kukuvadza uye haina kuravira.
Magurovhosi eNitrile akagadzirwa neyakagadzirwa nitrile zvinhu, isina mapuroteni mu latex anogona nyore kukonzera kukanganiswa kwevanhu, nehunyanzvi hwepamusoro, kunzwa kwakapfava, kugadzikana uye kusatsvedza, kuchinjika kushanda.
Nitrile magurovhosi haana phthalic acid ester, silicone mafuta, amino compounds, ane yakanaka kwazvo yekuchenesa kuita uye antistatic properties, kuchembera kuramba uye mafuta kuramba kuita, kucheneswa kwemuenzaniso wemagirovhosi enitrile akagadzirwa zvinoenderana nechimiro chemuviri wemunhu weruoko, aine kungwarira kukuru, yakanakisa tensile zvivakwa uye puncture kuramba, yakakwirira tensile simba uye yakanakisa kupfeka kuramba.
Magurovhosi eNitrile anochinjika, akasununguka uye anonamira nemaoko.Iine maitiro ekugara uye kuchengeteka.
Iyo yebhuruu pigment inowedzerwa muyakagadzirwa nhanho, uye chigadzirwa chakapedzwa hachina kusunungurwa, hapana kupera, uye hapana pesvedzero pachigadzirwa.
Yakagadzirwa ne100% synthetic nitrile butadiene rubber, yakaderera ion yemukati.